--- Select --- ကန့်ဘလူ ကန်ပက်လက် ကန်ပြား ကလော ကော့ကရိတ် ကော့သောင်း ကျိုက်ခမီ ကျောက်ဆည် ကျောက်ပန်းတောင်း ကျွန်းလှ ချောက် ဆိပ်ဖြူ ဆော ညောင်ရွှေ(အင်းလေး) တပ်ကုန်း တောင်ကြီး တောင်သာ ထားဝယ် နတ်မောက် နမ္မတီး နေပြည်တော် (ဘောဂ) နေပြည်တော် (မြို့မ) နေပြည်တော် (သပြေကုန်း) နောင်ချို နွားထိုးကြီး ပုဂံ/ညောင်ဦး ပုပ္ပါး ပဲခူး ပျော်ဘွယ် ပြင်ဦးလွင် ပြည် ဖားအောက် ဘားအံ ဘုတ်ပြင်း မကွေး မန္တလေး မလှိုင် မိတ္ထီလာ မိုးကောင်း မိုးညှင်း မုဒုံ မုံရွာ မော်လမြိုင် မြင်းခြံ မြစ်ကြီးနား မြဝတီ မြိတ် ရန်ကုန် ရမည်းသင်း ရေး ရွှေညောင် ရွှေဘို သိုက်ချောင်း သံဖြူဇရပ် ဟိုပင် ဟဲဟိုး အင်းတော် အောင်ပန်း
Please check if you are foreigner.
Powered by Innoveller
မန္တလာမင်းမှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှူများဖြင့် နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏
ဖော်ရွှေပျူဌာသောဝန်ထမ်းများ၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ခရီးသည်များအားကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေရပါမည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် မော်ဒယ်မြင့်ကားသစ်ကြီးများဖြင့် ပြေးဆွဲပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် မော်ဒယ်မြင့် ကားသစ်ကြီးများဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ခရီးစဉ်တလျှောက် စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ မိမိစိတ်ကြိုက် ရုပ်သံ၊ ဂိမ်းများဖြင့် အနားယူနိုင်ရန်အတွက် Tablet တစ်လုံးစီပါ Business Class, First Class (Scania Touring Bus) Scania VIP(2+1) ခရီးစဉ်များ၊ ကျယ်ဝန်းသော(၄၄)ယောက်စီး အထူးခရီးစဉ်များအား မနက် ၊နေ့လည်၊ ညယာဉ်ထွက်ချိန်များဖြင့် ပြေးဆွဲပို့ဆောင်ပေးခြင်း။
ခရီးသွား ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အရှိန်ထိန်းစနစ်ပါရှိပြီး၊ အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
နေ့စဉ်ထွက်ရှိသောခရီးစဉ်အားလုံးမှ ယာဉ်(၁)စီးလျှင်ရဟန်းတော်(၁)ပါးအား ခရီးစရိတ်ကုသိုလ်အဖြစ်လှူဒါန်းခြင်း။
ရန်ကုန်ဂိတ်မှ နံနက်(၉:ဝ၀)(၁၀:၀ဝ)နှင့် (၁၂:၀၀)ထွက်ခရီးစဉ်နှင့် လိုက်ပါမည့်ရဟန်းတော်များအား ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း။
ခရီးသွားရဟန်းတော်များအား ရန်ကုန်ဂိတ်မှ အအေးများကပ်လှူခြင်း။
ခရီးစဉ်များတွင် ရေသန့်၊ တာဝါ၊ သွားတိုက်တံများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ယာဉ်ပေါ်တွင် ဇိမ်ရှိရှိအနားယူနိုင်ရန် ခြုံစောင်၊ ခေါင်းအုံးများ ထားရှိပေးခြင်း။
ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ အတွက် 'ဝန်ဆောင်မှနင့်ကျန်းမာရေးသင်တန်းဆင်း' ယာဉ်မောင်/ယာဉ်မယ်များမှ ခရီးစဉ်တလျှောက်တွင် မိမိတို့၏ မိသားစုသဖွယ်စောင့်ရှောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားလိုအပ်သောဝန်ဆောင် မှုများ ဝန်ဆောင်မှနင့်ကျန်းမာရေးသင်တန်းဆင်း ယာဉ်မောင်/ယာဉ်မယ်များမှ ခရီးစဉ်တလျှောက်တွင် မိမိတို့၏ မိသားစုသဖွယ်စောင့်ရှောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ညပိုင်းရောက်ရှိခရီးစဉ်များအား (အခမဲ့)ကြို/ ပို့ယာဉ် စီစဉ်ပေးခြင်း။
အထူးအခွင့်အရေးများခံစားနိုင်မည့် VIP Member Card စီစဉ်ပေးခြင်း။
မိသားစု၊ Company၊ အသင်းအဖွဲ့များအတွက် (အထူး)ကားစင်းလုံးငှား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
Mobile Phone ရှိရုံဖြင့် မန္တလာမင်း ခရီးစဉ်များအားလုံးအတွက် ကားလက်မှတ်များကို လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနုိုင်အောင် စီစဉ်ထားခြင်း။
မန္တလာမင်း တရားဝင် Website ဖြစ်သော www.mandalarminn.com.mm သို့ဝင်ရောက်ကာ မန္တလာမင်း Activities များကိုလေ့လာနိုင်ခြင်း။
Technology & Banking Partners
မော်လမြိုင်-နေပြည်တော် (မြို့မ)-နေပြည်တော် (ဘောဂ)
နေပြည်တော် (ဘောဂ)-နေပြည်တော် (မြို့မ)-မော်လမြိုင်
Forget your booking?
က-၃၊ ပစောက်ကွင်း (အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၊ ဝင်ပေါက်(၁)အနီး) Ph: 09-5020181, 09-259354411, 09-253379954/64
ကုန်တန်ဆာငှာန Ph: 09-450066418, 09-798582000
အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက် Ph: 09-796782000, 0973105000
တိုက်(၅၅) အခန်း(၆) ဖဆပလ ၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမ (ကုန်ရွေး/တန်ဆာဌာန) Ph : 09764900940, 09954900940
ကိုမြတ်၊ဦးချစ်မောင် အိမ်ရာ အနီး၊တာမွေ၊ Ph: 09450596162, 09977118491
ဘောဂသီရိကားဝင်း Ph: 09-49245111, 067-26020
မြို့မဈေး Ph: 09-977225974, 09-49245222, 067-421939
သပြေကုန်းဈေး Ph: 09-420754443, 09977225976
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ တပ်ကုန်းမီးပွိုင့်အနီး၊ ဝါမင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီး၊ တပ်ကုန်းမြို့။ Ph: 09-448012556, 0977225978
ပထမလမ်းမတော်လမ်း (ရွှေဘုံသာဘုရားအနီး) Ph: 09-43291000, 09977225976
ပုဂံရွှေပြည် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း Ph: 09429291000, 09777989203
ဘူတာလမ်းဆုံမီးပွိုင့်အနီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။ Ph: 061-61196
အဆောင်(စီ)၊ အခန်း(၇၊၈)၊ ချမ်းမြေ့ရွှေပြည်အဝေးပြေးဝင်း Ph: 02-78991, 09-43062159, 09402651991
၂လမ်းx၈၃လမ်းထောင့် Ph: 09-91007993
သီရိပဒေသာကားဝင်း Ph: 0943133533, 09798969319
YMCA တိုက်တန်းထောင့်၊ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်း၊ Ph: 085-2021993, 09-787905895
C-1၊ မြေနီကုန်းအဝေးပြေးဝင်း၊ မော်လမြိုင် Ph: 09-263679305, 09-263679306, 09-253536648, 09-253379001
အမှတ်(၂၃၈)အေ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကမ္ဘာအထူးကုဆေးခန်းရှေ့၊ မုဒုံမြို့။ Ph : 09-425291224
ချောင်းနှစ်ခွကားဂိတ်အနီး၊ သိန်းကမ္ဘာ အထူးကုဆေးခန်းရှေ့ ၊မုဒုံမြို့။ 09-425260880
သံဖြူဇရပ်ကားဝင်းကြီး Ph: 09-425272527
မကွေးအဝေးပြေးဝင်း၊ မကွေးမြို့ Ph : 09-256083936 , 09-256083937
အဆောင်(စီ)၊ အခန်း(၅)၊ မြင်းခြံအဝေးပြေးဝင်း Ph: 066-2022349 , 09-33232326, 09-256102944
အမှတ်-၁၆/၂(ဘီ)၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရှေ့၊ ၄ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့ Ph: 09-779950501, 09-779950502, ထိုင်း Ph: 0888126170
အဆောင်(၂) အမှတ်(၁၀/၁၁)၊ အဝေးပြေးကားဝင်း (၁) ၊ မြိတ်မြို့ Ph : 09778884090
အမှတ်(၃/၈) ၊ ကန်ဖျားလမ်းမကြီး ၊ အမှတ်(၅) အ.လ.က ကျောင်းရှေ့ ၊ Ph: 09-458884090
ကားကြီးဝင်းဂိတ် Ph: 09-455671005, 09-771000744
ဥတ္တကြီးကားဂိတ် 09-455671006, 09-771000766
C-1၊ အေးသာယာကားကြီးဝင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ Ph: 09-781172003, 09424336050
အမှတ်(၃၉)၊ တောင်ပေါ်ပင်လုံလမ်း၊ ကန်အောင်ရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့ 09-781172004, 09424336060
ဗိုလ်ချူပ်လမ်းမကြီး ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ရုံးဘေး Ph: 09-458885090, 09-89743020(Thai)
(၃)မိုင် ၊ အဝေးပြေးကားဝင်း Ph: 09-778885090
Ph: 09-400685807, 09-766665807
အခနျး (၈, ၉) နောငျခြိုကားဝငျး , ကြောကျတိုငျအနီး၊
Ph :09269333776, 09965050437
အခနျး ၃၅၊ အဆောငျ - ၃ ၊ ပွညျအဝေးပွေး ယဉျရပျနားစခနျး၊ ပွညျ မွို
Ph: 09269333774, 09965050436
ကြိုကျခမီ ဘုရားဝငျး အတှငျး
Ph: 09269333779, 09965050438
Our Transportation Routes
Yangon ↔ Naypyitaw
Yangon ↔ Tat Kone
Yangon ↔ Meikhtila
Yangon ↔ Bagan/Nyaung Oo
Yangon ↔ Kyaut Pan Taung
Yangon ↔ Mandalay
Yangon ↔ Pyin Oo Lwin
Yangon ↔ Mawlamyein
Yangon ↔ Mudon
Yangon ↔ Than Phyu Za Yat
Yangon ↔ Magway
Yangon ↔ Myingyan
Yangon ↔ Myawaddi
Yangon ↔ Myeit
Yangon ↔ Dawei
Yangon ↔ Taung Gyi
© 2017 Mandalar Minn Express | Powered by